Nahatratra 64 isa mantsy ireo sekoly nandray anjara, notronin’ireo fikambanana maro samihafa. Toraka izany koa ireo mpiasan’ny kaominina izay nanatevina ny filaharana sady naneho ny talentany tamin’ny alalan’ny dihy. Tsy latsa-danja ny fisiana ankizivavy kely iray nampiseho ireny lalao niharo dihy Hula hoop mampiasa ireny cerceau ireny. Niezaka nitondra ny fahaiza-manaony ihany koa ireo mpianatra avy amin’ny sekoly hafa tamin’ny alalan’ny fomba fitafy isam-paritra mampiavaka antsika eto Madagasikara. Nofaranana tamin’ny fizarana loka ho an’ireo fokontany nahavokatra betsaka sy tsara indrindra tao anatin’ilay hetsika santa-bokatra izany, notarihin’ny Ben’ny tanàna Rado Razafindratsimba.